Front Page | တန်ဖိုးရှိသောဘဝနှင့် ရပ်တည်ခြင်း
ဦးအောင်ဆန်းဦး၏ တန်ဖိုးရှိသောဘဝနှင့် ရပ်တည်ခြင်း ( LivingaLife with Values ) မှ ကောက်နုတ်ချက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ကြည့်ခြင်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်သောသူတစ်ဦးက ထင်ရာမြင်ရာဖြင့် ရှုပ် ထွေးသော အိမ်တစ်လုံးဆောက်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းနှင့်တူသည်။ မည်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမဆို ရှင်းလင်းပြတ်သားသောလိုအပ်ချက်များဖြင့် စတင် သင့်သည်။ ထို့နောက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဆောက်လုပ်ရေးကို လိုအပ်သော စီစဉ်ထားသည့်အစီအစဉ်အတိုင်းစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြေခံအုတ်မြစ် လိုအပ် ချက်များကို ဦးစွာတည်ဆောက်ပြီးမှသာ ခေါင်မိုးအပေါ် အဆင့်ဆင့်သို့ တက်သွား မည်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုအစိုးရနှင့်အခြားဒေသန္တရအစိုးရများ၏ အခြေခံ အုတ်မြစ်များ ပေါင်းစည်းမှုများအတွက် လုံလောက်ရှင်းလင်းသော အစီအစဉ် ရှိသင့်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မည်သည့်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်မှ မပါဝင် ခြင်းအားဖြင့် ဗဟိုအစိုးရ၏တာ၀န်ကို ယူရန်မစွမ်းနိုင်ပုံရသည်။ ငပိန်းများ၊ ငတုံးများ၊ ငကြောင်များနှင့် ငယောင်များ သာလျှင်သူမ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး အစပျိုးမှု ကို အလေးအနက်ထားသည်။ ခိုင်ခံ့သောအိမ်တစ်လုံး ဖြစ်လာရန်အတွက် လိုအပ်သောအခြေခံအုတ်မြစ် မသိဘဲ ခေါင်မိုးစနစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက် ခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ သူမ၏စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု အားလုံးသည် ယခုအချိန်အထိမအောင်မြင်နိုင်သေးပါ။
ဘရာဇီးနှိင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီကို မည်ကဲ့သို့ ပြန်လည် တည်ဆောက်သွားခဲ့သည်ကို လေ့လာသင်ယူသင့်
ဦးအောင်ဆန်းဦး၏ မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေး နှင့်အစိုးရ စနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်ခြင်း (Development needed for Myanmar Political and Governmental Systems) မှ ကောက်နုတ်ချက်
အစိုးရအတွက်စဉ်းစားရန်အဓိကမဏ္ဍိုင်(Pillars of Principles)များ
အစိုးရအတွက်စဉ်းစားရန် အဓိကမဏ္ဍိုင်(Pillars of Principles)များမှာ တရားမျှတမှုနှင့် တရား မျှတသော ဥပဒေများ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ မျှတစွာခွဲဝေခြင်း၊ လက်တွေ့ကျသောပညာ ရေး အစီအစဉ်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးအစီအစဉ်များ၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် များနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်များ၊ သဘာဝ သယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုများ၏ ကောင်းကျိုးများ ကိုနားလည်ခြင်း (ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြာမူများကို ဖယ်ရှားခြင်း)၊ လက်တွေ့ကျကျ စဥ်းစာတွေးခေါ်တက်သော စိတ်ဓါတ်မျိုးကို နားလည်သဘော ပေါက်ခြင်း၊ ပျင်းရိသော၊ ညံ့ဖျင်းသော၊ လိမ်ညာကောက်ကျစ်လှည့်ဖျားတက် သော Lie ,Cheat and Deceive (LCD) ကဲ့သို့ လူတန်းစားများ နည်းပါးစေရေး၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးနည်းလမ်းများ (ဆိုက်ဘာ Cyber System အခြေ ပြု စနစ်များ)၊ အစိုးရဌာနများ၏ (အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဗျူရိုကရေစီ) အလေ့အကျင့်များကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ခွင့်နှင့် မီဒီယာများ စောင့်ထိန်းရမည့်စည်းမျဥ်းများ စသည်ဖြင့်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြာမှု(Culture Disorders)ကို ရိုက်ခတ်သော အချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြာမှု(Culture Disorders)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြာမှု(Culture Disorders)ကို ရိုက်ခတ်သော အချက်များမှာ Constructive Criticism အပြုသဘောဆောင်သောဝေဖန်မှုကို နားမလည်သော ငပိန်း(လှည့်ဖျားရလွယ်သူ)၊ ငတုံး (ထူတူတူအတတ) ၊ ငကြောင် နှင့် ငယောင် Negative unhappy person ဆန်ကုန်မြေလေး လူတန်းစားပြည်သူ လူထုများဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့သည် ဆဲဆိုခြင်း၊ အောက်တန်းကျသောနည်းဖြင့် လူတကာကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း နည်းမျိုးစုံဖြင့် အတိုင်းဝိုင်းကို သုက္ခပေးခြင်း နှင့် စိတ်ဆင်းရဲစေအောင်း လုပ်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ စင်္ကာပူကို ကျော်မယ် ဆိုသော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမူမမှန် (Personality Disorders) ရောဂါရှိသော ပါတီခေါင်းဆောင်များ ၊ ပါတီကိုယ်စလှယ်များ ၊ နိုင်ငံ‌ရေးသမားများ၏ လေထိုးလေလျှော် မြူစွယ်မူကို ယုံကြည်သော ငပိန်း(လှည့်ဖျားရလွယ်သူ)၊ ငတုံး (ထူတူတူအတတ) ၊ ငကြောင် နှင့် ငယောင် Negative unhappy person လူတန်းစားပြည်သူလူထုများပပျောက်မှ ၊ ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး လူတန်းစားပပျောက်မှ၊ နိုင်ငံခြား အထောက်အပံ့ယူပြီး တိုင်းပြည်ကို ပဋိပက္ခ ပြုလုပ်သူများပပျောက်မှ၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်မည်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အနိုင်ရရှိမူ (WIN-WIN)ကို စဥ်းစားတွေးခေါ် ဆောင်ရွက်ခြင်း
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အနိုင်ရရှိမူ (WIN-WIN)ကို စဥ်းစားတွေးခေါ် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ စွမ်းအားပင်ဖြစ်သည်။ ဤစွမ်းအားမဲ့အဖွဲ့အစည်း၏ အတိုင်း အတာနှင့်အရွယ်အစားသည် အလွန်ပင်အကန့်အသက်ရှိပြီး ဤစွမ်းအားမျိုး ရှိသော အဖွဲ့အစည်းနှင့်ယှဥ်ပြိုင်လို့မရနှိင်ပါ။ သမိုင်းတလျှောက်တွင် ပျောက်ကွယ် ကုန်သော ယဥ်ကျေးမူများရှိသကဲ့သို့ အချင်းချင်းနှင့် အိမ်နီချင်းမျိုးနွယ်စုများအ ကြား အေးချမ်းစွာနေထိုင်ဆက်ဆံနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့် နိမ့်ပါးပျောက်ကွယ် သွားသော ယဥ်ကျေးမူများလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အသက်အရွယ် ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုရင့်ကျက်ထက်မြက်လာကြဖို့ မျှော်လင့်ထားပါသည်။ အသိပညာနှင့် အတွေ့အကြုံများလာသည်နှင့်အမျှ စိန်ခေါ်မူရှိသောစီမံကိန်းများ သာမက လူပေါင်းမျိုးစုံနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်စေမည့် မှန်ကန်သောဖြေ ရှင်းနည်းများရှာဖွေရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာကြ မည်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနား သော ဖြစ်ရပ်မှန်များကို နားလည်သဘောပေါက်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်တော်တို့ ၏ လိုက်လျောညီထွေမူများလည်းတိုးတက်လာပြီး လက်တွေ့မကျပဲ အပိုသက် သက် ဖြစ်နေသော အလုပ်မျာကိုရှောင်ရှားပြီး မှန်ကန်သောအခွင့်အ‌ရေးများ သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မူများဖြစ်လာစေရန် နည်းလမ်းများရှာဖွေ တွေ့ရှိ နှိင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တန်ဖိုးမြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း (Value added work) နှင့် အကျိုးမဲ့ အလုပ်များအကြား တွင်ခွဲခြားသိမြင်ပြီး သတိမူ လုပ်ကိုင် ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိရေး WIN-WIN အတွေးအခေါ် စိတ်နေ သဘောထားသည် တန်ဖိုးမြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ပိုမိုကြီးမားကောင်းမွန်သော အကျိုးရလဒ် “Pies” များထွက်ပေါ် စေနှိင်သည်။ အကျိုးရလဒ်များ ခွဲဝေရာတွင်လည်း မျှသလွယ်ကူစေသည်။
အမှားအယွင်း လုံးဝမရှိစေရေး zero error ၊ ချို့ယွင်းချက် လုံးဝ မရှိစေရေး zero defects စနစ်များ အကြောင်း
ကျွန်တော်သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာသိပ္ပံဘွဲ့ ( Bachelor of Science in Electric Engineering (BSEE)) နှင့် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ( Master of Science in Electric Engineering (MSEE))တို့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများထဲ မှာ Fortune 500 ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကုမ္မဏီ (၅၀၀) တွင်လည်းပါဝင်ပါသည်။ ကျွန် တော်သည် ထိပ်တန်းသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ Research and development (R&D) ဂျာနယ်များတွင် သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများလည်း ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အမေရိကန်ရေတပ်၌ စတင်အလုပ်ဝင်ချိန်တွင် San Diego ဆန်ဒီယေဂို မြို့အခြေစိုက် North Island နော့သ်အိုင်းလန်း လေယာဥ်တင်သင်္ဘောအခြေစိုက် စခန်းမှ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာသုတေသန ဓါက်ခွဲခန်းဌာန Materials Engineering Lab တွင် တာဝန်ကျခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဌာန၏တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဝန်ထမ်းဆုကို ကျွန်တော် ရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်အငြိမ်းစာမယူမီ၊ အမေရိကန်နှိင်ငံ ကာကွယ်ရေးဌာန၏ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက် မှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော အာကာသနှင့်နျူကလီးယား နည်းပညာများအတွက် အသုံးချနှိင်ရန်လေ့ကျင့်ပေးသော စွမ်းရည်ဆိုင်ရာရင့်ကျက်မူပုံစံ CMM Capability Maturity Model (အသေးစိတ်လေ့လာရန်အတွက် web https://www.guru99.com/capability-maturity-model-cmm-cmm-levels-a-fool-s-guide.html တွင်ကြည့်ပါ) သင်တန်း တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။ အမေရိကန်သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ အဆိုပါ နည်းစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိင်ရန် ဒေါ်လာသန်း ထောင်နှင့်ချီ သုံးစွဲခဲ့ရ သည်။ အမှန်ကတော့ အလွန်အရေးကြီးလှသည့် လုပ်ငန်းစဥ်များ ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် ကြီးမားလှသည့် ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့်အတူ ဆော့ဝဲလ်ကို အသုံး ပြုပြီး သမာဓိတရား၏ အမြင့်ဆုံးအမိန့်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သည်။ ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ အသုံးပြုနေသည့် ဤစနစ်ကို အမှားအယွင်း လုံးဝမရှိစေရေး zero error ၊ ချို့ယွင်းချက် လုံးဝ မရှိစေရေး zero defects ပင်ဖြစ်သည်။
အလွန်အမင်းအရေးကြီးသည့် လမ်းဆုံလမ်းခွ ဖြစ်သော ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာပြည်သူလူထုများအနေဖြင့် အလွန်အရေးကြီးသည့် လမ်းဆုံ လမ်းခွ၌ ရောက်ရှိနေကြောင်းကို အပြည့်အဝသတိထားသင့် ပါသည်။ စဥ်းစား ဉာဏ်ရှိသော မြန်မာပြည်သူလူထုများ စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ စစ်တပ် အသိုင်းအဝိုင်းက လည်း စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ တိုင်းရင်းသားများလည်း စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ တစ်နေ့လုပ်မှတစ်နေ့စားရသော ဆင်းရဲသားများ စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ မှန်ကန်သော ဥပဒေစိုးမိုးရေးများဖြစ်စေခြင်သော တရားမျှတမှုဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်သူများလည်း စောင့်ကြည့် နေကြသည်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာကို ဂရုစိုက်တဲ့သူများလည်း စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ မြန်မာနိုင်ငံကို စိတ်ဝင်စားနေသော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ များကလည်း စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာပိုင်းတွင် အပြုသဘော ဆောင်သော ခံစားမှုရှိသူများကလည်း စောင့်ကြည့် နေကြသည်၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး လူသားဆန်ပြီး တိုင်းပြည်မှာကြီးပြင်းနိုင်ရန်အတွက် စိတ်၀င်စားသော ကျောင်းသားများလည်း စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးဆုံးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အမျှော်အမြင်လုံးဝမရှိသော သို့မဟုတ် တရားမျှတမှုမရှိသော ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဟုခေါ်သည့် အစိုးရ၏အာဏာ ကျဆင်း သွားမလား ဆိုသည်ကိုလည်း စောင့်ကြည့်နေကြသည်။
သမာဓိ၊ သီလ၊ အသိ-တသိ တရား ဟူသောစိတ်ဓါတ်
ကျွန်တော်ပြောခြင်သော သမာဓိ၊ သီလ၊ အသိ-တသိတရား ဟူသောစိတ်ဓါတ်သည် ရည်မှန်းချက် နှင့်ပန်းတိုင် (aims and objectives) လိုအပ်ပါသည်။ သမာဓိ ဆိုသည် စာကားလုံးတစ်လုံး (single word) နှင့် ရှင်းပြလို့မရနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းသည်အဓိပ္ပါယ်များစွားဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသောစာကားလုံးဖြစ်သည်။ သမာဓိ ရှိဖို့ အစ(starting point)က ဥပမာအားဖြင့် ခေါက်ဆွဲကြော် တဲ့လူတယောက်သည် ခေါက်ဆွဲကြော်သည့်နေရာမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်သော သမာဓိရှိမှသာလျှင် ၎င်း‌ကြော်ရောင်းနေသောခေါက်ဆွဲကြော်သည် အောင်မြင်နိုင်မည်။ ခေါက်ဆွဲ ကြော်သောလူ၏ သမာဓိတရားနှင့် အာကာသယာဥ် (Rocket) ကြီးကို လကမ္ဘာရောက်အောင် လုပ်ဆောင်ရမည့်သူ၏ သမာဓိတရားတို့သည် မတူကြပါ။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ သမာဓိတရားသည် မတူကြသော်ငြားလည်း ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရမည့် အခန်းကဏ္ဍ၏အလုပ်တာဝန်နေရာမှာတော့ အထွဋ်အထိမ့်ရောက်သွားအောင် လုပ်ဆောင်သွားနိုင်သည့် ( the best they can do) သမာဓိတရား စိတ်ဓါတ်ကို ရှိရမည်။
NLD အစိုးရ ပြည်သူလုထုအပေါ်် နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက် ရိုတ်ခြင်း ဥပမာ
NLD အစိုးရ၏ ပြည်သူလူထုအပေါ်် နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက် ရိုက်ခြင်း ဥပမာ
လမ်းအရှည် ၁ မိုင်လျှင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၂ ဘီလီယံခန့်ထိ ကုန်ကျမည့် ပဲခူး-ကျိုက်ထို အမြန်လမ်း မကြီးအဆင့်မြင့်တင်ရန် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၈၃.၈ သန်း ချေးငွေရယူမည့် အစီအစဉ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ယင်းလမ်းပိုင်းသည် ခရိုနီကုမ္မဏီ တစ်ခုကို နှစ် ၃၀ BOT ချပေးထားသောကြောင့် - https://burma.irrawaddy.com/news/2020/07/29/227153.html
၁ ။ လွှတ်တော်ကို အဆိုတင်တွင်းသော ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အရာရှိများ၏ တာဝန်မဲ့မူနှင့် အကျင့် ပျက်ခြစားမှုများ ကင်းရှင်းပါသလား၊
၂။ မဲဆွယ်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်ခြင်းသည် အာဏာကိုအလွဲသုံးစားခြင်းမှ ကင်းရှင်းပါသလား၊
၃။ ခရိုနီကုမ္မဏီကသာ လမ်းအသုံးပြုခကောက်နေပါသဖြင့် ပဲခူး-ကျိုက်ထို အမြန်လမ်းမကြီး အဆင့်မြင့် တင်ရန် ကုန်ကျစရိတ်သည် ခရိုနီကုမ္မဏီနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် လက်ရှိအစိုးရက ‌ငွေချေးပြီး စိုက်ပေးရသနည်း? ချေးငွေ ခွင့်ပြု ပေးဒါက လက်ရှိအစိုးရ၊ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်တာက ခရိုနီကုမ္မဏီ၊ အကြွေးစပ်ပေးရ မှာက ပြည်သူလူထု။ လက်ရှိအစိုးရအနေနှင့်က ရိုးသားပါသလား စဥ်းစားစေခြင် ပါတယ်။
NLD ၏ ဥပဒေမဲ့အုပ်ချုပ်မူများ ဆက်လက်အုပ်ချုပ် ခွင့်ပြုမည်လော?
NLD၏ ဥပဒေမဲ့အုပ်ချုပ်မူများ ဆက်လက်အုပ်ချုပ် ခွင့်ပြုမည်လော?
NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သော်ငြားလည်း သမ္မတ အထက်မှာနေရာယူ၍ အာဏာကိုင်ထား သည်။ ထိုစည်းမျဉ်းသည် NLD ပါတီအတွင်း၌သာသက်ဆိုင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ မကိုက်ညီပါ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက် ခြင်းခံရသည့် မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မဆို ၎င်း၏ သစ္စာစောင့်သည်မှုသည် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး ပေါ်တို့အတွက်သာဖြစ်ပြီး ပါတီ၏ အကြီးအကဲပေါ်အတွက် မဟုတ်ပါ။ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဟု ကျင့်သုံးနေသည့် အချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဥပဒေကို ကျော်လွန်ပြီး သမ္မတ အထက်မှ နေ၍ကြိုးကိုင်ထားပြီး မိမိစိတ်နှင့်မိမိကိုယ် မဆောင် ရွက်နိုင်သော သမ္မတကို ပြည်သူလူထုအနေနှင့် လုံးလုံးလျားလျားလက်ခံနိုင်ပါသလာ? လူထု များသည် NLD ကိုထပ်မံမဲပေးကာ မကောင်းသောအကြံများနှင့် ၎င်းကဲ့သို့သော အခြားသူများအား မြန်မာနိုင်ငံအား ထိုကဲ့သို့ ဥပဒေမဲ့အုပ်ချုပ်မူများ ဆက်လက် အုပ်ချုပ် ခွင့်ပြုမည်လော?
သို့မဟုတ်ပါက မှားယွင်းသည့် ထပ်တူအာဏာရှင်စနစ်အုပ်ချုပ်မူ (၅) နှစ် ထပ်မံကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်ပါ လိမ့်မည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး လောကသို့ခြေမချမှီကပင် မိမိကိုယ်ကိုပေါ်တွင် ရည်မှန်း ချက်များ စွာမရှိသော စုကြည်လိုပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကောင်းကျိုးအတွက် သမာဓိတရား SAMADHI ရှိလိမ့် မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုမျှော်လင့် ရမည် နည်း။ မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိအခြေအနေအတွက် မည်သူကပင် သမ္မတ ဖြစ်ပါစေ၊ ၎င်းတို့အနေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထင်ရာမြင်ရာ စိတ်ကူးတည့်ရာ ပြောဆို သည့်အတိုင်း သူမ၏အလိုဆန္ဒများကိုသာ ထမ်းဆောင်ပေးနေရမည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုတော့ NLD ပါတီ အုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒအရ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် သမ္မတအထက် တွင်ရှိပါသည်။ သူမအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာအကာအကွယ်များမရှိပါ။ ပြည်သူလူထု၏ အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးရန် အုပ်ချုပ်မူအာဏာရှိရသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတအား မိမဲ့မြင်ပြု နေသော ထင်ရာဆိုင်းတက်သည့် သူမလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ခွင့်မပြု သင့်ပါ။ လက်ရှိ NLD အစိုရ၏ အုပ်ချုပ်မူ စွမ်းရည်ကိုကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင် မပြုသင့်ပါ။ သို့မဟုတ် ပါက မှားယွင်းသည့် ထပ်တူအာဏာရှင်စနစ် အုပ်ချုပ်မူ (၅) နှစ် ထပ်မံကျင့်သုံး သွားမည် ဖြစ်ပါ လိမ့်မည်။
ဦးအောင်ဆန်းဦး မှ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကို ပေးအပ်သောစာ
လေးစာအပ်ပါသော နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးခဗျာ
မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးလောကသို့ ခြေမချမှီကပင် မိမိကိုယ်ကိုပေါ်တွင် ရည်မှန်းချက်နှင့် ပန်းတိုင် (ဦးတည်ချက်) Aims and Objectives (Direction) မရှိသော စုကြည်လို ပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကောင်းကျိုး အတွက် သမာဓိတရား SAMADHI ရှိလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုမျှော်လင့်ရမည်နည်း။
တရားရေးရာအပေါ် သမ္မတကသာ သြာဇာသက်ရောက်မူရှိကြောင်း ပြောကောင်းပြောဆို လိမ့် မည်။ မှန်ပါတယ် နိုင်ငံတော်သမ္မသည် ယခုအချိန်အထိ ၎င်းသည် တရားသူကြီး များအနေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏အမှားများကို ဖုံးကွယ်ပေး နိုင်ရန် အတွက် ခွင့်ပြုချက်ပေးထားပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တိုင်းပြည်အပေါ် တာဝန်မဲ့သော သမ္မတ တစ်ဦးအဖြစ် သမိုင်းတွင်ခဲ့မည်ကို ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပင် ဂရုမစိုက်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်မှသာ ခင်ဗျား၏သမ္မတရာထူး သက်တမ်းကို လုံခြုံစေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည်ရလိမ့်မည်ကတော့ ခင်ဗျားသည် သမ္မတသက်တမ်း မကုန်ဆုံးမည် သတ္တိရှိရှိ NLD ၏ဥပ‌ဒေမဲ့မူဝါဒလမ်းစဥ်ကို ထိုးဖေါက်ပြီး တိုင်းပြည်အပေါ် တာဝန်ရှိရှိ သစ္စာစောင့်တည်သော သမ္မတတစ်ဦး ဖြစ်လာနိုင်မည်လော? သမာဓိတရား ရှိသောသူတိုင်းသည် ၎င်းတို၏နာမည်ဖြင့် လိမ်ညာ၊ ကောက်ကျစ်၊ လှည့်ဖျား Lie ,Cheat and Deceive (LCD) ခြင်း အပြုအမူအတွက် အသုံးပြုခွင့် ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ၂၀၂၀ ခှနှစ်တွင် ပိုမို ကောင်း မွန်သော တရားမျှတမှုရှိသည့်အစိုးရသစ်တစ်ခုကို ရွေးကောက်တင်မြှောက် နိုင်ပြီး အပြစ်ကျူးလွန်သူများကို တရားစွဲဆိုနိုင်လိမ့်မည် ဟုကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါသည်။